China Umthengisi wase China wase 1050 1060 1070 1100 abenzi be coil aluminium kunye nabathengisi | Huifeng
Ikhoyili yeAluminiyams ezisetyenziswa kakhulu kwi-elektroniki, ukupakisha, ulwakhiwo, oomatshini, njl
Ikhoyili yeAluminiyam ukuhlelwa
I-1000 yealuminium ipleyiti kunye nekhoyili
Ishidi le-aluminium elimele i-1000 series libizwa ngokuba li-aluminium. Phakathi kwawo onke la manqaku, uthotho lwe-1000 lolwothotho kunye nomxholo wealuminium. Ubunyulu bunokufikelela ngaphezulu kwe-99.00%. Kuba ayiqulathanga ezinye izinto zobuchwephesha, inkqubo yokuvelisa ilula kwaye ixabiso lincinci. Okwangoku lolona chungechunge luqhelekileyo lusetyenziswayo kumashishini aqhelekileyo. Uninzi lweemveliso ezijikeleza kwimarike zii-1050 kunye ne-1060 uthotho. I-1000 ye-aluminium yeplate yeplate imisela ubuncinci bomxholo wealuminium kolu luhlu ngokwamanani amabini okugqibela eArabhu. Umzekelo, amanani amabini okugqibela ama-Arabhu kuthotho lwe-1050 angama-50. Ngokomgaqo wegama lophawu lomhlaba jikelele, umxholo wealuminium kufuneka ufike kuma-99.5% okanye nangaphezulu ukuze ube yimveliso efanelekileyo. Umgangatho wobugcisa welizwe lam i-aluminium (gB / T3880-2006) ikwacacisa gca ukuba umxholo wealuminium ka-1050 ufikelela kuma-99.5%. Kwangokunjalo, umxholo wealuminium ye-1060 yeepleyiti zealuminium kufuneka ifike kuma-99.6% okanye nangaphezulu
2000 ipleyiti yealuminiyam kunye nekhoyili
Ummeli 2A16 (LY16) 2A06 (LY6) 2000 iipleyiti zealuminium zibonakaliswe ngokuqina okuphezulu, apho umxholo wobhedu uphezulu, malunga ne-3-5%. 2000 iipleyiti zealuminium zizinto zokuhamba ngenqwelomoya, ezingasetyenziswa rhoqo kumashishini aqhelekileyo.
3000 uthotho ipleyiti aluminiyam kunye coil
Ikakhulu egameni le-3003 3003 3A21. Inokubizwa ngokuba yi-anti-rust aluminium. Itekhnoloji yokuvelisa ipleyiti yealuminiyam yelizwe elili-3000 ilunge kakhulu. I-3000 ye-aluminium yeplate yeplate yenziwe ngamanganese njengeyona nto iphambili. Umxholo uphakathi kwe-1.0-1.5. Kuluhlu olunomsebenzi ongcono wokulwa nerusi. Ihlala isetyenziswa kwiindawo ezinomswakama ezinje ngeomoya omoya, iifriji, kunye neemoto zangaphantsi. Ixabiso liphezulu kunelo thotho li-1000. Olu luthotho olusetyenziswa ngokuxhaphakileyo.
4000 series aluminiyam ipleyiti kunye coil
Ipleyiti yealuminium emelwe kuthotho lwe-4A01 4000 yeyoluhlu olunomxholo ophezulu wesilic. Ngokwesiqhelo umxholo wesilicon uphakathi kwe4.5-6.0%. Yeyamizinto zokwakhas, izahlulo zoomatshini, izinto zokubumba Indawo yokunyibilika ephantsi, ukumelana nokulunga kwengcaciso yeMveliso: Inempawu zokumelana nobushushu kunye nokunxiba ukumelana
Imele uthotho lwama-5052.5005.5083.5A05. Itheyibhile ye-aluminium ye-5000 yoluhlu lweplate ye-aluminium esetyenziswa ngokuxhaphakileyo, eyona nto iphambili yimagnesium, kwaye umxholo we-magnesium uphakathi kwe-3-5%. Inokubizwa ngokuba yi-aluminium-magnesium alloy. Ezona mpawu ziphambili luxinano olusezantsi, amandla aphezulu eqine kunye nobude obuphezulu. Kwindawo enye, ubunzima be-aluminium-magnesium alloy bungaphantsi kunolunye uthotho. Ke ngoko, ihlala isetyenziswa ekuhambeni ngenqwelomoya, ezinje ngeetanki zepetroli. Isetyenziswa ngokubanzi kumashishini aqhelekileyo. Itekhnoloji yokuqhubekeka kukuphosa ngokuqhubekekayo kunye nokuqengqeleka, okungokwesiciko seplastikhi eshushu eshushu, ukuze isetyenziselwe ukulungiswa kwe-oxidation enzulu. Kwilizwe lam, ipleyiti ye-aluminium ye-5000 yoluhlu lelinye lawona macwecwe e-aluminium aqolileyo
6000 uthotho iphepha aluminiyam kunye coil
Ummeli we-6061 ikakhulu uqulethe izinto ezimbini zemagniziyam kunye nesilicon, ke oko kugxila kwizibonelelo ze-4000 uthotho kunye no-5000 uthotho lwe-6061 yimveliso ebunjiweyo ebunjiweyo ye-aluminium, efanelekileyo kwizicelo ezineemfuno eziphezulu zokumelana nokubola kunye ne-oxidation. Ukusebenza kakuhle, ukusebenza kakuhle kwe-interface, ukutyabeka ngokulula, kunye nokusebenza kakuhle. Ingasetyenziselwa izixhobo zoxinzelelo olusezantsi kunye namalungu eenqwelomoya.
Iimpawu ngokubanzi ze-6061: Iimpawu ezigqwesileyo zojongano, ukutyabeka ngokulula, amandla aphezulu, ukusebenza kakuhle, kunye nokumelana ngokuqinileyo.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwe-6061 aluminium: iinxalenye zeenqwelomoya, iinxalenye zekhamera, ii-couplers, izixhobo zaselwandle kunye nezixhobo, izixhobo zekhompyuter kunye namalungu, izinto zokuhombisa okanye ezahlukeneyo zekhompyutha, iintloko zehenjisi, iintloko zemagnethi, i-brake pistons, iipiston zombane, izixhobo zombane, iivelufa kunye neendawo zevalvu.
7000 uthotho iphepha aluminiyam kunye coil
Ummeli we-7075 ikakhulu une-zinc. Ikwangokothotho lokuhamba ngenqwelomoya. I-aluminium-magnesium-zinc-copper alloy, i-alloy ephathekayo yokushisa, kunye ne-alloyum ephezulu kakhulu ene-wearable resistance. Iplate ye-aluminium engama-7075 ikhululekile kwaye ayizukukhubazeka okanye igobe emva kokuqhubekeka. Zonke super super Zonke izitya ezingama-7075 zealuminium zifunyenwe ngocoselelo, ezinokuqinisekisa ukuba akukho blister kunye nobumdaka. Amacwecwe ealuminium angama-7075 ane-conductivity ephezulu yokushisa, enokunciphisa ixesha lokwenza kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle. Olona phawu lubalulekileyo kukuba ubunzima be-7075 bubunzima obuphezulu, amandla e-aluminium alloy, ahlala esetyenziselwa ukwenziwa kwezakhiwo zeenqwelomoya kunye nekamva. Ifuna ukwenziwa koxinzelelo oluphezulu lwendawo kunye nokubumba ngamandla amakhulu kunye nokumelana ngokuqinileyo.
8000 uthotho iphepha aluminiyam kunye coil
Eyona isetyenziswa ngokuxhaphakileyo yi-8011, eyeyesinye uthotho. Kwimemori yam, ipleyiti yealuminium enomsebenzi ophambili kukwenza iminqwazi yebhotile ikwasetyenziswa nakwiradiyetha, uninzi lwazo luyi-aluminium foil. Ayisetyenziswa kakhulu.
"Jinan Huifeng aluminiyam Co., LTD". Ngaba ishishini lokuvelisa imveliso elitsha lealuminium, elihlengahlengiswe kwishishini eliqhutywa ngurhulumente, libekwe e-China ”idolophu yase-rose” -iPingYin County yedolophu yaseJinan, igubungela indawo engaphezulu kwama-600 eehektare.
Egqithileyo I-1060 0.55mm aluminium strip yokwenza iselfowuni
Okulandelayo: Ukucamngca ngeAluminiyam Mirror Sheet 3003 3004 3105 Ingxubevange yokuhombisa
aluminium uphahla coil
umhombiso we-coil aluminium
coil aluminium mveliso
China mveliso 5052 PVDF umbala camera aluminiyam c ...
Umthengisi waseTshayina we-1050 1060 1070 1100 aluminu ...
Umgangatho ophezulu 1060 1100 3003 3105 5052 PE PVDF p ...